Ngwaọrụ 5 iji nyere gị aka ịzụ ahịa gị n'oge ezumike | Martech Zone
Oge ịzụ ahịa ekeresimesi bụ otu oge kachasị mkpa maka afọ maka ndị na-ere ahịa na ndị na-ere ahịa, yana mkpọsa ahịa gị kwesịrị igosipụta mkpa ahụ. Inwe mkpọsa dị irè ga-eme ka ika gị nwee nlebara anya kwesịrị ya n'oge oge kachasị baa uru nke afọ.
N'ụwa nke oge a, egbe egbe agaghị akwụsị ya mgbe ị na-achọ iru ndị ahịa gị. Dị ga-ahazi mbọ ahịa ha iji gboo mkpa ndị ahịa. Oge eruola ịmalite ịmalite mkpọsa ezumike ndị ahụ dị mkpa, yabụ anyị achịkọtara ndepụta nke ngwaọrụ ịntanetị iji nyere gị aka na mbọ gị ịkọwapụta ahịa gị.
Ọ bụghị ihe ijuanya na Google jisiri ike mepụta web kachasị ewu ewu nchịkọta uwe na ụwa, na Google Analytics. Akụrụngwa a na-enye ozi dịka onye na-eleta saịtị gị, otu ha siri rute ebe ahụ, wee mejupụta gị na omume ha ozugbo ha nọ na weebụsaịtị gị. Jiri ozi ohuru a iji chọta ngalaba ndị ahịa gị kacha baa uru ma mepụta ozi azụmaahịa dịka ọ dị.
Nchịkọta Google zuru oke maka azụmaahịa buru ibu na obere ka ụlọ ahụ dị na ụdị freemium. N'elu ọkwa dị elu nke ngwanrọ ahụ, enwere SDK maka nyochaa arụmọrụ nke ngwa mkpanaka gị na ndị ahịa.
Salesforce Cloudgwé ojii bu ihe bara uru bara uru iji zipu SMS ma zipu ihe ngosi dika ihe omuma, ijikwa ahia email, ijikwa mgbasa ozi mgbasa ozi na data CRM, na ichota omume nchọgharị nke ndi ahia.
Ijikọta ngwaọrụ ndị a na-enye ọtụtụ ohere maka ịmepụta olu akara na-agbanwe agbanwe n'ofe mbọ ahịa gị niile. Ngwaọrụ ọ bụla na-enye ohere maka ọtụtụ ụzọ ịchụso omume nke ndị ahịa ma nye gị ohere ịlele ngalaba nke ọ bụla n'onwe gị. Otu ọdịda bụ na Salesforce na-eji ọnụ ahịa dị oke ọnụ ahịa, nke nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka ọtụtụ obere ụlọ ọrụ.
Ngwaahịa nwere ike inwe mmetụta dị ike na otu ị si kpebie ịre ndị ahịa gị ahịa. Ma ị na-agba mbọ ịkwalite ihe etinyere na shelf gị ruo ọtụtụ izu, ma ọ bụ kpọsaa ngwa ahịa ọhụrụ nke onye kachasị ere ahịa, ị ga-achọ ngwa ọrụ maka njikwa ngwa ahịa, nke bụ ebe BizSlate abata.
Ngwọta maka ngwa ahịa na njikwa, ntinye akụrụngwa, yana ajụjụ ọnụ, e-commerce na ntinye EDI na-eme sọftụwia a zuru oke maka azụmaahịa obere na etiti. Nke kachasị dị mkpa, ọ na - enye gị ohere ịchụso ihe ndị mmadụ zụtara, na - enyere gị aka iduzi ahịa gị n'ọdịmma n'ọdịnihu.
Ọ bụrụ na BizSlate adabaghị maka azụmaahịa gị, enwere gburu ọtụtụ ngwaahịa njikwa ngwa ahịa ọzọ nke ahụ nwere ike ịdabara mkpa gị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmepụta ndu maka ụdị azụmaahịa gị na ntanetị nke agbakwunyere na weebụsaịtị gị, mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ ozi ịntanetị nwere ike ịbụ nnukwu ngwaọrụ. Mpempe akwụkwọ enyere gị aka ịmepụta ụdị ngwa ngwa dị mfe ma dị mfe ma na-ahapụ gị ka ị nyochaa ọnụego ntụgharị ha ma tụọ arụmọrụ ha. Sọftụwia ahụ na - enyere gị aka ịnwale ụdị gị ma chọpụta ụdị nsụgharị kachasị aga nke ụdị njide gị. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhụ ọdịnaya nke ụdị edechara nke edebeghị edebeghị.
Ozugbo i jirila ụdị ịntanetị gị iji jide ụzọ, ịnwere ike iji ụdị ọhụrụ ịkwanye maka ire ere. Gini na iji akwukwo ozo tinyeghachi ndi ahia mgbe ha zutara ya na uzo nzaghachi di nma maka nzụta ha?
Email marketing na-abụkarị akụkụ dị mkpa nke usoro ịzụ ahịa ọ bụla, ị ga-enwe nchegbu mgbe niile banyere otu ozi email gị si ele ndị ahịa gị anya na igbe igbe ha. Ozi ịntanetị gị kwesịrị ịdọrọ anya mgbe ị na-eme ihe kwekọrọ na akara gị. Chọrọ ka ozi ịntanetị gị dị mma na ndị ahịa email ọ bụla enwere ike ịlele ha. Ọ bụrụ na ndị a yiri ka ọ bụ nnukwu nsogbu, echegbula onwe gị, Email na Acid dị iji nyere aka.
Ikpo okwu na-enye ohere ịmepụta email HTML na nchịkọta akụkọ n'ịntanetị, yabụ ị nwere ike ihuchapụta anya email gị n'ọtụtụ ndị ahịa, bulie koodu ahụ maka nke ọ bụla, ma jiri arụmọrụ nke ozi gị nchịkọta ụlọ. Jiri atụmatụ ndị a maka elele gị na nka gị ozi ịntanetị zuru oke iji tinye ndị ahịa gị aka ma nwekwuo mmasị n'ịzụ.
Ugbu a ị nwere ngwaọrụ ịchọrọ iji mepụta atụmatụ azụmaahịa ezumike gị, ịnwere ike ịrụ ọrụ na -emepụta usoro gị. Isi ihe ga-aga nke ọma bụ ịmalite n'oge, na-enye gị ohere iji nwalee mkpọsa gị nke ọma, ma mee mgbanwe ọ bụla tupu ezumike ahụ abịa ebe a. Ghọta ozi ịre ahịa gị ga - eme ka akara gị gosipụta ihe ịga nke ọma n’oge a.
Tags: email na acidGoogle Analyticssalesforce ahịa ojii